Sidina sidina hampifandraisana an'i Seychelles sy Romania
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Madagascar Malgache Gasy News » Sidina sidina hampifandraisana an'i Seychelles sy Romania
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Romania • Madagascar Malgache Gasy News • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny Nosy Seychelles dia manantena mpitsidika marobe avy amin'ny tsena Eoropeana Atsinanana any Romania satria manomboka andiany vaovao i Air Seychelles rahampitso zoma 30 aprily 2021.
Ny sidina mivantana voalohany dia hanomboka hiasa eo Seychelles sy Romania.
Ireo tabilao isan-kerinandro ireo dia hitohy hatramin'ny alatsinainy 17 mey, hiverina amin'ny vanin-taona mafana amin'ny volana Aogositra ary avy eo amin'ny ririnina amin'ny Desambra.
Mifanaraka tsara izany amin'ny ezaka fanarenana fizahan-tany any Seychelles satria tsena maro kokoa no mahita ireo nosy ho toerana azo antoka.
Ny kaompaniam-pirenenan'ny Ranomasimbe Indianina dia hiasa amin'ny sidina manelanelana ny renivohitr'i Romania, Bucharest, ary ny nosy Mahé, izay lasa sidina mivantana voalohany mampifandray ireo firenena roa tonta.
Ho an'ny dia voalohany, ny sidina 9 ora, tantanan'ny fiaramanidina Air Seychelles 168, mahazaka A320Neo dia namidy ary antenaina hipetraka amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Seychelles amin'ny 0930 ora.
Miala any Bucharest amin'ny 2300 ora ny alakamisy, ny sidina dia hijanona eo anelanelan'ny fijanonana ara-teknika any Kairo, Egypte noho ny famenon-tsolika alohan'ny hamerenany ny làlany mankany Seychelles.